Nin caan ah oo boorsadiisa laga helay gacanta haweeney uu dilay – Kismaayo24 News Agency
Nin caan ah oo boorsadiisa laga helay gacanta haweeney uu dilay
by admin 10th November 2019 10th November 2019 098
Taariikhyahan caan ah oo u dhashay dalka Ruushka ayaa qirtay inuu dilay gabar uu jeclaa horayna u ahayd gabar arday ah oo uu wax soo bari jiray, iyada oo boorsaddiisa laga helay gacanta gabadha dilkeeda loo haysto.
Barafasor Oleg Sokolov oo 63 jir ah ayaa ahaa mid cabsan isaga oo xilliga ay booliska qabanayeen ku sugnaa meel wabi ah si uu xubnaha gabadha uu googooyey uu ugu tuuro.
Booliska oo kiiskaasi baaritaan ku sameeyey ayaa waxay guriga Sokolve ka heleen qaybaha kale ee jirka gabadha uu dilar ee Yeshchenko, oo 24 jir ah.
Barafasor Sokolov ayaa ahaa aqoonyahan caan ah oo dalka Faransiiska abaal marinno badan ka guddoomay.
“Wuxuuna qirtay inuu dambigaasi geystay,” ayuu yiri qareenka u doodayey Alexander Pochuyev oo u warramay wakaaladda wararka ee AFP.
Wuxuuna Sokolov uu intaa ku daray inuu ka qoomameynayo faldambiyeedka uu geystay diyaarna uu u yahay inuu garab siiyo howlaha baaritaanka.
Barafasor Sokolov wuxuu booliska u sheegay inuu saaxibaddii uu u dilay xilli ay arrin isku qabteen kaddibna uu madaxa ka jaray, lugaha iyo gacmahana uu ka gooyey.
Wuxuuna intaa ku daray inuu qorsheynayey inuu xubnaha jirkeeda uu googooyey uu wabiga ku tuuro si aan loo arkin.
Denmark oo Iran ku eedaysay shirqool dil
Nin iyo gabadhiisa oo dil ku hafray qof tuugsanaya
Mr Pochuyev wuxuu sheegay Barafasor Sokolov iney daweyn dhinaca kulka jirkiisaa oo hoos u dhacay ay u socotay, cadaadiska dhanka caafimaadka uga yimid awgiina ay dhici karto inuu gabadhaasi u khaarijiyey.
Barafasoorka oo taariikhda aqoon dheer u leh wuxuu qoray buugaag badan oo taariikh ah oo la xiriira Napoleon wuxuu sida oo kale uu filimaan badan oo la soo saaray uu ka noqday la taliye dhinaca taarikhda ah. Buugaag badanna qoraaga labaad ayuu ka noqday.
Dhammaantood waa Sokolov iyo Yeshchenko waxay barteen taariikhda faransiiska, wuxuuna intooda badan ay jecel yihiin iney ku labbistaan labbisku uu qaadan jiray Napoleon.
Ardayda uu wax u soo dhigana waxay Barafasoorka ku tilmaameen inuu ahaa nin hal abuur leh wuxuuna si wanaagsan ugu hadlayey afka Faransiiska.
Wuxuua sida oo kale uu ka mid ahaa xubin ka tirsan Machadka Cilmiga Bulshada, Dhaqaalaha iyo Siyaasadda Faransiiska (Issep), wixiina machadku sheegay iney ka qaadeen dhammaan jagooyinki uu machadka ka hayey.
“Weligeen kuma aanan fakarin inuu barafasoor dhan uu dambi sidaa u fool xun uu geli karo,” ayaa lagu yiri qoraalka inuu dambigaasi galay lagu sheegay.
Why Rwanda is unhappy with Uganda
Shariif Sheekh Axmed oo dagaal ku hanjabay (Daawo)
Digniin Cusub oo laga soo saaray Duufaanno horleh oo kusoo wajahan Xeebaha Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo iyo Khayre Oo Mucaaradka Dowlada Siinaya Wasiiro.
Qorshihi Maraykanka uu beeraleyda Somaliyeed uga xiri laha biyaha iyo NSS ti Somalia oo….
admin 14th August 2016
Wararkii ugu dambeeyay Xiisada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya & sir cusub oo la helay
Mohamed Abdirashid Abaajo 17th February 2019